တရုတ်နိုင်ငံက အာဖဂန်ပြည်သူများ၏ ရွေးချယ်မှုများကို လေးစားကြောင်း နှင့် ချောမွေ့သော အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် တောင်းဆို - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံက အာဖဂန်ပြည်သူများ၏ ရွေးချယ်မှုများကို လေးစားကြောင်း နှင့် ချောမွေ့သော အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် တောင်းဆို
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွမ်းရင်အား ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် ပြုလုပ်သော နေစဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် တွေ့ရစဉ်(Photo from the website of the Ministry of Foreign Affairs)
ပေကျင်း ၊ ဩဂုတ် ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာဖဂန်ပြည်သူများ၏ ရွေးချယ်မှုများကို လေးစားကြောင်း နှင့် အာဖဂန်အခြေအနေတွင် ချောမွေ့သည့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် မျှော်လင့်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဩဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တာလီဘန်တို့က အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၌ စစ်ပွဲပြီးဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း နှင့် မကြာမီတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်အစ္စလာမ်မစ်စော်ဘွားနိုင်ငံ(Islamic Emirate of Afghanistan) ထူထောင်ရန် ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဩဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့က အာဖဂန်နိုင်ငံသားများ နှင့် နိုင်ငံခြားသံတမန်များ၏ လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွမ်းရင်က အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ အခြေအနေသည် ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများ ကြုံတွေ့ခဲ့ကြောင်း နှင့် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာဖဂန်ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒများ နှင့် ရွေးချယ်မှုများကို လေးစားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၌ အကြမ်းဖက်မှု နှင့် ရာဇဝတ်မှုများအားလုံး ထိန်းချုပ်ရေး ၊ အာဖဂန်ပြည်သူများအား စစ်ပွဲများမှ ကင်းဝေးစေရေး နှင့် ၎င်းတို့၏ လှပသောဇာတိမြေအား ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး အတွက် ချောမွေ့စွာ အသွင်ကူးပြောင်းရေး သေချာစေရန် တာလီဘန်အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကတိကဝတ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် တရုတ်နိုင်ငံက မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွမ်းရင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံက တာလီဘန်တို့နှင့် အဆက်အသွယ်ရှိပြီး တာလီဘန်အုပ်စိုးမှုကို အသိအမှတ်ပြုမလားဆိုသည့် မေးခွန်းအား ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာဖဂန်အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာ နှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ အုပ်စုခွဲအားလုံး၏ ဆန္ဒကို အပြည့်အဝ လေးစားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အာဖဂန် တာလီဘန်တို့နှင့် အဆက်အသွယ်ကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း နှင့် အာဖဂန်အရေး နိုင်ငံရေးပြေလည်မှုကို မြှင့်တင်ရာတွင် အပြုသဘောဆောင်သည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် အမြဲပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဇူလိုင် ၂၈ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိသည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ တာလီဘန်တို့၏ နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲ Mullah Abdul Ghani Baradar နှင့် ထျန်းကျန်းမြို့၌ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
“တာလီဘန်တွေဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံက ပါတီတွေ ၊ လူမျိုးစုတွေ အားလုံးနဲ့ ပေါင်းစည်းပြီးတော့ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့အတွက် အုတ်မြစ်ချကာ ကိုယ်ပိုင်အမျိုးသားရေးအခြေအနေတွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကျယ်ပြန့်ပြီး အားလုံးပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေးပုံစံကို ထူထောင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။” ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွမ်းရင်က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တာလီဘန်တို့က တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရေး ဖြစ်ပေါ်ရေး မျှော်လင့်ချက်ကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်း ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို ၎င်းတို့ မျှော်လင့်ကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံကို အန္တရာယ်ဖြစ်အောင် အာဖဂန်နယ်မြေကို အသုံးပြုရန် မည်သည့်တပ်ဖွဲ့ကိုမျှ ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် လွတ်လပ်ရေး နှင့် နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးကို အမြဲလေးစားကြောင်း ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို မည်သည့်အခါမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည် မဟုတ်ကြောင်း နှင့် အာဖဂန်ပြည်သူများအားလုံးအပေါ် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသောမူဝါဒကို အမြဲလက်ကိုင်ပြုကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွမ်းရင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် အာဖဂန်ပြည်သူများ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ကံကြမ္မာကို လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ခွင့်ကို လေးစားကြောင်း နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံနှင့်အတူ အိမ်နီးချင်းကောင်း ၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ဆက်ဆံရေးများကို တည်ဆောက်ရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတို့တွင် အပြုသဘောဆောင်သည့် အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဟွာချွမ်းရင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများစွာတို့သည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှ ၎င်းတို့၏ သံရုံးဝန်ထမ်းများ ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။တရုတ်နိုင်ငံက အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ သံရုံးအား ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးမြန်းမှုအပေါ် ဟွာချွမ်းရင်က ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံသံရုံးသည် ပုံမှန်အတိုင်း လည်ပတ်နေဆဲ ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ် နှင့် သံရုံးဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့၏ တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံသားအများစုသည် တရုတ်သံရုံး၏ အစီအစဉ်ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒအလျောက် နေထိုင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည့် လူတစ်ချို့ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ သံရုံးက ၎င်းတို့နှင့် အနီးကပ်အဆက်အသွယ်ရှိကြောင်း နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ အခြေအနေအား ဆက်လက် ဂရုပြုမည် ဖြစ်ပြီး အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ တရုတ်နိုင်ငံသားများအားလုံးကို လိုအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် အကူအညီများအား ထောက်ပံ့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဟွာချွမ်းရင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Aug. 16 (Xinhua) — China respects the choices of the Afghan people and hopes forasmooth transition in the Afghan situation,aForeign Ministry spokesperson said Monday.
On July 28, Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi met in Tianjin with Mullah Abdul Ghani Baradar, political chief of Afghanistan’s Taliban.
“We hope the Taliban will unite with all parties and ethnic groups in Afghanistan to establishabroad and inclusive political structure that suits its own national conditions to lay the foundation for realizingalasting peace in Afghanistan,” she added.
On many occasions, the Taliban has expressed the hope of developing sound relations with China, saying they look forward to China’s participation in the reconstruction and development of Afghanistan, and that they will never allow any forces to use the Afghan territory to endanger China, according to the spokesperson.
“China respects the right of the Afghan people to independently determine their own destiny, and stands ready to develop good-neighborly, friendly and cooperative relations with Afghanistan, and to playaconstructive role in the peace and reconstruction of Afghanistan,” Hua said.
Photo – Hua Chunying,aspokesperson for the Ministry of Foreign Affairs, speaks atadaily press briefing, March 24, 2021. (Photo from the website of the Ministry of Foreign Affairs)
အာဖဂန်တွင် ဆိုးရွားလာသောအခြေအနေသည် အမေရိကန်က ကြိုတင်မှန်းဆထားသည်ထက် “ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်း” ဘိုင်ဒန် ပြောကြား